कृषिमन्त्री प्रकरणमा कस्ले के भने ? – NewsAgro.com
कृषिमन्त्री प्रकरणमा कस्ले के भने ?
July 1, 2015 July 2, 2015 newsagro0Comments Nepal, newagro.com, कृषि सचिब उत्तमकुमार भट्टराई Agriculture Secretary Uttamkumar Vattarai, कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली Agriculture Minister Hariprasad Parajuli
त्यो फोटो मन्त्रीज्यूको होइन : कृषि सचिब
काठमाडौं, असार १७ – कृषिमन्त्री हरीप्रसाद पराजुलीले असार पन्ध्रमा मुलपानीमा महिलाहरुमाथि अश्लिल हर्कत गरेको फोटो र भिडियो मिडियाभरी छ्याप्छ्याप्ती छ । तर, सोही कार्यक्रममासँगै भएका कृषि सचिव उत्तम कुमार भट्टराईले मन्त्रीको अश्लिल हर्कद देखेनन् ।
कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराई
मन्त्रीसँग दिनभरीसँगै भएको बताउने सचिव भट्टराईले पत्रकारले गलत फोटो प्रकाशन प्रशारण गरेको बताएका छन् । ‘म पनि दिनभरी मन्त्रीज्यू संगसंगै छु,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘मिडियामा आएको त्यो फोटो मन्त्रीज्यूको हैन, पत्रकारले गाँसेर बनाएका हुन् ।’ उनले मन्त्री त्यस्तो स्वभावको मान्छे नभएकाले मिडियामा आएको कुराको गलत प्रचार भएको समेत दावी गरे । लौं हेर्नुहोस् ! ‘कृषिमन्त्री पराजुलीको अश्लिल’ हर्कत
यसैबीच मंगलबार महिलामाथि अश्लिल हर्कत गर्ने मन्त्री बुधबार मन्त्रालयमै जान सकेका छैनन् । मिडियाको गलत हल्लाका कारण पराजुली मन्त्रालय जान नसकेको सचिव भट्टराईले बताए । ‘बिहान चिया सहकारीको एउटा कार्यक्रममा हामीसँगै थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि खाना खान लाग्यौँ, तर मिडियाको हल्लाका कारण मन्त्रीज्यू आज मन्त्रालय नै आउन सक्नुभएन ।’
स्पष्टीकरणका लागि मन्त्रीको दिनभर दौडधुप
अश्लिल हर्कत गर्ने मन्त्री पराजुली दिनभरी मन्त्रालय नै नगएर स्पष्टीकरणका लागि दौडधुपमा व्यस्त रहे । बिहान ईन्द्रेणी फुडल्याण्डमा एउटा कार्यक्रम सकेर १२ बजे खाना खान पुल्चोकस्थित निवासमा पुगेका मन्त्री पराजुली केहीबेर आराम गरेपछि फेरी अर्को कार्यक्रममा गएका थिए । त्यसपछि स्पष्टकीकरणका लागि गृहमन्त्रालय पुगेका मन्त्री पराजुली फेरी ओली निवास बालकोटमा पुगेको मन्त्रीका स्वकिय सचिव हेमचन्द्र पोखरलेलले बताए । ‘१२ बजेसम्म कार्यक्रम नै थियो, कार्यक्रम सकेर निवासमा खाना खाई फेरी अर्को कार्यक्रममा जानुभयो ।’ पोखरेलले भने, ‘त्यपछि गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेर केहीबेर अघि फेरी बाल्कोट जानुभयो ।’
गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्छ : योगेश भट्टराई
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले गल्ती गर्ने मन्त्रीले कार्वाही भोग्नुपर्ने बताएका छन् । महिलाहरुमाथि अश्लिल हर्कत गर्ने कृषिमन्त्री हरी पराजुलीको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको बेला भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सार्वजनिक मर्यादामा बस्नुपर्छ ।’ भट्टराईले रातोपाटीसंग भने, ‘यो विषयमा संसदमा पनि कुरा उठिसकेकाले मन्त्रीले संसद र जनतालाई प्रष्टिकरण दिनुपर्छ । उनले मन्त्रीको गलत क्रियाकलाप गरेको भनेर चौतर्फी आलोना भएकोले पार्टीले पनि स्थाई कमिटीको बैठक बोलाएर यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ओलीले बालकोटमा डाकेर मन्त्री पराजुलीलार्इ झपारे
काठमाडौं धान दिवस कार्यक्रममा अभद्र शैलीमा महिलाहरुलार्इ समातेर आलोचित कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलार्इ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा बोलाएर स्पष्टिकरण लिएका छन् ।
बुधबार अपरान्ह ६ बजे बालकोट पुगेका मन्त्री पराजुलीलार्इ धान दिवस मनाउने क्रममा महिलालार्इ समातेको घटनाबारे अध्यक्ष ओलीले जानकारी मागेका थिए । मन्त्री पराजुलीको हर्कतले सिंगो पार्टी र सरकारको समेत बेइज्जत भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले स्पष्टिकरण लिएपछि मन्त्री पराजुलीले सञ्चारमाध्मयमा आएजस्तो घटना नभएको बताएका थिए ।
बालकोट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्ष ओलीले करिब आधा घन्टासम्म राखेर मन्त्री पराजुलीसँग स्पष्टिकरण लिएका थिए । अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पराजुलीलार्इ आफ्नो पदीय मयार्दाको ख्याल गर्न चेतावनी दिएका थिए । मंगलबार दिउँसो काठमाडौंको मूलपानीमा मनाइएको धान दिवसका क्रममा हिलो छ्याप्ने बहानामा मन्त्री स्थानीय महिलाहरुलार्इ अश्लिल शैलीमा समातेका थिए ।
मन्त्री पराजुलीले महिलाहरुलार्इ समातेको समाचार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएपछि उनको र एमाले पार्टीको समेत कडा आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री पराजुलीसँग एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बुधबार दिउँसो मन्त्रालयमै बोलाएर उनको हर्कतबारे स्पष्टिकरण लिएका थिए ।
मन्त्री पराजुलीले धान दिवसमा देखाएको हर्कतको बुधबार बसेको संसद् बैठकमा समेत कडा आलोचना भएको छ । सभासद्हरुले मन्त्री पराजुलीमाथि महिला हिंसाको अभियोगमा कारबाही माग गर्दै पदबाट तत्काल बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका थिए । एमालेकै केही केन्द्रीय सदस्यसहितका नेताहरुले भने मन्त्री पराजुलीलार्इ ‘कलंक’ को संज्ञा दिँदै उनलार्इ मन्त्री पदबाट तत्काल हटाउन अध्यक्ष ओलीसँग माग गरेका छन् ।
हरि पराजुलीले भने, ‘असार १५ को रमाइलो न हो’
कृषि मन्त्री हरि पराजुलीले धान दिवसका अवसरमा महिलासँग हिलो खेलेको विषयलाई लिएर पार्टीकै केन्द्रीय नेताहरुले आलोचना गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, ‘न मेरो खराब नियत थियो, न मिडियामा आइजस्तो नै हो ।’
बुधबार ४ बजे उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमकहाँ पुगेका मन्त्री पराजुलीले भने, ‘त्यो असार १५ को रमाइलो भन्दा केही थिएन ।’ उपप्रधानमन्त्री गौतमका विश्वासपात्र मानिएका पराजुलीले मंगलबार गरेको रोपाइँ रमाइलोको तस्बिर भिडिओ बाहिर आएपछि गौतम पनि तनावमा छन् । पराजुलीले गौतमलाई भेटेर हिजोको अवस्था बताएका हुन् ।
महिलाबाट पनि खण्डन
मंगलबार कृषि मन्त्री रोपाइँमा पुगेको विषयमा नेपाली मिडिया र नेकपा एमालेभित्र सनसनी बनेपछि उनलाई बोलाउने दुई महिला समूहले पनि अतिरञ्जना भएको बताएका छन् । मनोहरा मिश्रित कृषक समूह र महाङ्काल सफल कृषक समूहले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर रोपाइँका विषयमा अनावश्यक चर्चा भएको भन्दै खण्डन गरेका छन् । उनीहरुले समाचार कपोलकल्पित, दिग्भ्रमित र अनर्गल नै भनेका छन् ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन
१५ असारमा मन्त्रीसँग रोपाइँ रमाइलो गरेका महिला समूह र रमाइलो गर्न पुगेका मन्त्री पराजुली १७ असार अर्थात् बिहीबार फेरि एकैस्थानमा देखिने भएका छन् । उनीहरुले रोपाइँ रमाइलोका विषयमा अनर्गल प्रचार भएपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका छन् । पराजुलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘स्थान फिक्स भइसकेको छैन, पत्रकारहरुलाई खबर हुँदैछ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन हुन्छ ।’
कृषिमन्त्री हरि पराजुलीको तस्बिर बाहिर आएपछि एमालेमा आलोचना भएको छ । एमाले नेता प्रदीप नेपालले खुलेर यसको विरोध गरेका छन् । घुमाउरो भाषामा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले ट्विटरमा विरोध गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य टंक कार्कीले पनि आलोचना गरेर फेसबुक स्ट्याटस लेखेका छन् । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले पद छाडे हुने तर्क लेखेका छन् । एमालेकै पत्रकारहरुले पनि आलोचना गरेका छन् । यद्यपि एमालेले मन्त्री पराजुलीलाई अहिलेसम्म कुनै स्पष्टिकरण सोधेको छैन ।
एमाले नेतृको प्रश्न, हरि पराजुली नामको कलंक अझै पदमा छ ?
कृषिमन्त्री हरिप्रासद पराजुलीले काठमाडौंको मूलपानीमा असार १५ को धान दिवस मनाउने क्रममा महिलाहरुलार्इ अभद्र शैलीमा समातेपछि उनीविरुद्ध आक्रोश ब्यक्त भइरहेको छ । एमालेका नेतासमेत रहेका मन्त्री पराजुलीको घिन लाग्दो हर्कतले उनको पद नै जोखिममा परेको छ । यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै खैनी मोलेका मन्त्री पराजुलीले मूलपानीमा महिलामाथि अभद्र ब्यबहार गरेपछि उनीमाथि एमाले नेताहरुले नै आगो ओकल्न थालेका हुन् ।
रोपाइँ दिवस मनाउन आएका सयौं मानिसका अगाडि स्थानीय महिलाहरुलार्इ समातेका तस्बिरले सामाजिक सञ्जाल भरिएपछि एमाले नेताहरुले आफ्नै लाज ढाक्न गाह्रो भएको उल्लेख गरेका हुन् । कृषिमन्त्री पराजुलीको हर्कत सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि एमालेकी वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य रचना खड्काले पराजुलीविरुद्ध कडा टिप्पणी गरेकी छन् ।
नेतृ खड्काले आफूले नगरेको गल्तीबाट पटक पटक लज्जित हुनुपर्ने विवशता आइपरेको जनाएकी छन् । ‘आफुले नगरेको गल्तीबाट पटकपटक लज्जित हुनूपर्ने यो विवशता’, उनले भनेकी छन्, ‘ हरि पराजूली नामको यो कलङ्क अझै पदाशीन पो छ है ।’ एमालेकै केन्द्रिय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री पराजुलीको यो हर्कतलार्इ अशोभनीयको संज्ञा दिँदै उनीमाथि तत्काल कारबाही गरिनुपर्ने अडान राखेकी छन् ।
‘उनीमाथि निसन्देह कारबाही गरिनुपर्छ, तर मैले पार्टीका तर्फबाट कारबाही गर्न सक्दिनु,’ नेतृ झाँक्रीले भनेकी छन्, ‘हाम्रा अध्यक्षले तीन मन्त्री हटाएर नया बनाउनुभएको थियो । उहाँले कस्ता मान्छेलार्इ मन्त्री बनाउनुभएछ भन्ने देखिँदैछ । नेतृ झाँक्रीले कृपाशुर शेर्पालार्इ पर्यटनमन्त्री बनाइएकोतर्फ कटाक्ष गर्दै अध्यक्ष ओलीले ३७ वर्षको छोरो भएपछि मन्त्री शेर्पालार्इ न्वारान गर्न लाएको भन्दै ब्यंग्य गरेकी छन् ।
‘महिला हिंसाको कुरा गर्नै परेनु,’ नेतृ झाँक्रीले भनेकी छन्, ‘हेरौं, मन्त्री पराजुलीका विषयामा पार्टी अध्यक्षले के गर्दा रहेछन् ? ” एमालेकै अर्का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले पनि एमालेले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरुले पार्टीको इज्जत धान्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको बताएका छन् ।
पार्टीले पटक पटक मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाउँदै नेता ढुंगेलले केही मन्त्रीको ब्यबहारले सिंगो टिम पार्टीलार्इ असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘एकाध मन्त्रीको व्यवहारले सिंगो टिम र पार्टीलाइ असर पार्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक अनुशासनको दायरा ख्याल गर्न नसक्नेले मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बस्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’
पराजुलीको पुत्लादहन हुने
कृषि मन्त्री हरि पराजुलीको पुत्ला एमाले कार्यकर्ताले नै जलाउने भएका छन् । एमालेको प्रभावशाली जनसंगठन अनेरास्ववियूले बिहीबार उनको पुत्ला जलाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । अनेरास्ववियूका शैक्षिक विभाग सचिव सुदेश पराजुलीले संगठनले व्यभिचारी मन्त्रीको बिहिबार बिहान ८ बजे सरस्वती क्याम्पस अगाडि पुत्ला जलाउने कार्यक्रम तय गरेको बताए ।
← धान दिवसमा महिला समात्‍ने मन्त्रीलार्इ हटाउन माग
कसैलाई दुःख दिन गरेको होइन, रमाइलो मात्र हो : कृषिमन्त्री पराजुली →
February 9, 2016 newsagro 0
बाख्रापालनको तयारीमा डा बाबुराम भट्टराई
सेनालाई बाकस जिम्मा लाउने निर्णय कसले गर्‍यो